फेरी भारी वर्षाको सम्भावना, कुन क्षेत्रमा कस्तो हुन्छ ? – Jaljala Online
Posted on July 21, 2019 July 21, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
साउन ५, काठमाडौँ । ठूलो वर्षा गराउने मौसमी प्रणाली मनसुन न्यून चापीय रेखा भारतबाट नेपालतर्फ नजिकिँदै गरेकाले वर्षाको मात्रा पुनः बढ्ने क्रममा रहेको मौसमविद्ले बताएका छन्।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद् मञ्जु बासीका अनुसार हाल नेपालदेखि दक्षिण रहेको न्यून चापीय रेखा बिस्तारै उत्तर आउने क्रममा छ। त्यसैकारण नेपालमा मौसम बदली र वर्षा हुने क्रम क्रमशः बढ्दै गएको छ।
देशको पूर्वी क्षेत्रका केही स्थानमा बिहानैदेखि मेघगर्जनसहित वर्षा भइरहेको र दिउँसो अन्य स्थानमा पनि पानी पर्ने सम्भावना रहेको उनले जानकारी दिइन्।
‘दिउँसो देशका केही स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना छ,’ उनले भनिन्, ‘दिउँसोभन्दा रातितिर बदली अझ सक्रिय हुने देखिएको छ, मध्य र पूर्वका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना पनि छ।’
आगामी २४ घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दै महाशाखाले भनेकाे छ- देशका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ जसका कारण ती क्षेत्रका पहाडी भू-भागमा पहिरो जानसक्ने भएकोले सामान्य सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिन्छ। पहाड तथा चुरेबाट बहने खोलाहरुमा जल सहत हल्का बढ्न सक्ने देखिन्छ।
भोलि सोमबारबाट यो क्रम अझ बढ्ने माैसमविद् बासीकाे अनुमान छ। किनभने सोमबार राति न्यून चापीय रेखा नेपाल नजिकै आइपुग्ने र पर्सि मंगलबार बिहान नेपालै भित्रिने संकेत देखिएको छ।
‘भोलि रातिदेखि भारी वर्षा सुरु हुने देखिन्छ,’ मौसमविद् बासीले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘पर्सिदेखि त्यो अझ बढ्ने छ।’
न्यून चापीय रेखा देशभित्रै आएपछि भारी तथा अविरल वर्षा हुने मौसमविद् बताउँछन्। तर यसअघि जस्तो धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना भने कम रहेको मौसमविद् बासीले बताइन्।
‘यसअघि न्यून चापीय रेखासँगै न्यून चापीय क्षेत्र पनि सक्रिय थियो, दुवै प्रणालीले गर्दा बढी नै वर्षा भएको थियो,’ मौसमविद् बासीले भनिन्, ‘यस पटक त्योभन्दा केही कम हुने देखिन्छ, तर भारी वर्षाचाहिँ हुन्छ।’
न्यून चापीय क्षेत्र केही कमजोर र त्यसको केही दिनपछि नै न्यून चापीय रेखा पनि नेपालबाट दक्षिण सरेर भारत प्रवेश गरेकाले केही दिनयता वर्षा जारी रहे पनि अविरल र भारी वर्षा रोकिएको थियो।
यस्तो छ महाशाखाले गरेको ३ दिने मौसमको पूर्वानुमान
राति: देशको पुर्वी भु-भागमा सामान्य देखि पुर्ण बदली साथै मध्य र पश्चिमी भु-भागमा आंसिक देखि सामान्य वदली रही देशका केहि स्थानहरूमा वर्षा हुने सम्भावना छ। पुर्व र मध्यका एक दुई स्थानहरुमा भारि वर्षा (Heavy rainfall) हुने सम्भावना छ ।
दिउँसो: देशको पुर्वी र मध्य भु-भागमा सामान्य देखि पुर्ण बदली साथै पश्चिमी भु-भागमा आंसिक देखि सामान्य वदली रहि पुर्वका अधिकांश स्थानमा साथै मध्य तथा पश्चिमका केहि स्थानहरुमा वर्षा हुनेछ। पुर्व तथा मध्यका एक दुई स्थानहरुमा भारि वर्षा (Heavy rainfall) हुने सम्भावना छ ।
राति: देशको पुर्वी र मध्य भु-भागमा सामान्यदेखि पुर्ण बदली साथै पश्चिमी भु-भागमा आंसिक देखि सामान्य वदली रही देशको पुर्वी तथा मध्यका अधिकांश स्थानहरुमा साथै पश्चिमका केहि स्थानहरूमा वर्षा हुनेछ । देशको पुर्व र मध्यका थोरै स्थानमा साथै पश्चिमका एक दुई स्थानहरुमा भारि वर्षा (Heavy rainfall) हुने सम्भावना छ ।
दिउँसो: देशको पुर्वी र मध्य पुर्ण बदली साथै पश्चिमी भु-भागमा सामान्य वदली रहि पुर्व र मध्यका अधिकांश स्थानमा साथै पश्चिमका केहि स्थानहरुमा वर्षा हुनेछ। देशको पुर्व र मध्यका थोरै स्थानमा साथै पश्चिमका एक दुई स्थानहरुमा भारि वर्षा (Heavy rainfall) हुने सम्भावना छ । पुर्व र मध्यका एक दुई स्थानमा अति भारी वर्षाको सम्भावना छ।
राति: देशको पुर्वी र मध्य पुर्ण बदली साथै पश्चिमी भु-भागमा सामान्य वदली रहि पुर्व र मध्यका अधिकांश स्थानमा साथै पश्चिमका केहि स्थानहरुमा वर्षा हुनेछ। देशको पुर्व र मध्यका थोरै स्थानमा साथै पश्चिमका एक दुई स्थानहरुमा भारि वर्षा (Heavy rainfall) हुने सम्भावना छ । पुर्व र मध्यका एक दुई स्थानमा अति भारी वर्षाको सम्भावना छ।
असार २६, २७ र २८ गते अविरल परेको वर्षाका कारण मध्य र पूर्वका नदीमा बाढी आउँदा तराई क्षेत्र डुबानमा परेको थियो । त्यसपछि मत्थर हुँदै गएको वर्षा शनिबारदेखि फेरि सक्रिय हुने बाटोमा अग्रसर रहेको मौसमविद् मञ्जु बासीले बताउनुभयो ।
मनसुनको न्यूनचापीय रेखा नेपालको दक्षिणमा रहे पनि बङ्गालको खाडीबाट नेपाल प्रवेश गरेको जलवाष्पयुक्त हावा र स्थानीय वायुको असरले मध्य र पूर्वमा मनसुन फेरि सक्रिय हुन थालेको उहाँको भनाइ थियो । अबको तीन दिन देशका विभिन्न क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने भविष्यवाणी महाशाखाले गरेको छ । अचानक पानी पर्ने र रोकिने गर्दा पनि बाग्मती, विष्णुमती लगायतका नदीमा जलसतह बढ्ने–घट्ने प्रक्रिया चलिरहेकाले सतर्क रहन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले भनेको छ ।
दुई÷तीन दिन बहाव सतर्कता तहभन्दा तल रहे पनि साउन ८ र ९ ताका मध्य तथा पूर्वी भेगको नदीको बहाव उच्च हुने भएकाले सतर्कता अपनाउनुपर्ने भनाइ महाशाखाको छ ।
जलविद् सुनिल पोखरेलले भन्नुभयो, “कन्काई, बाग्मती लगायतका नदीमा बाढी उच्च हुने सम्भावना छ, अहिले पनि केही नदीले सतर्कता तह पार गर्ने र तल झर्ने गरिरहेको अवस्था हो । ”
अति भारी वर्षाको सम्भावना, बाढीपहिरोबाट जोगिन आग्रह
Posted on July 23, 2019 Author Jaljala Online
साउन ७, काठमाडौं । आज (मंगलबार) देशका विभिन्न स्थानमा भारी तथा एक/दुई स्थानमा अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको बताउँदै बाढीपहिरो तथा डुबानबाट सजग रहन मौसमविद्ले आग्रह गरेका छन्। पूर्व र मध्यका अधिकांश तथा पश्चिमका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने सम्भावना छ । पूर्व र मध्यका केही तथा पश्चिमका थोरै स्थानमा ठूलो वर्षा हुने जनाइएको […]
आज २०७६ कार्तिक २१ गते विहीबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? पढ्नुहोस
Posted on November 7, 2019 Author Jaljala Online
आज २०७६ कार्तिक २१ गते विहीबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार दैनिकी कस्तो रहन्छ भन्ने भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष शुभ कार्यको योग छ । पारिवारिक मेलमिलाप बढ्नेछ । मन प्रशन्न रहने । राम्रो सहयात्रीको मिलन हुने […]
Posted on May 25, 2019 Author Jaljala Online
जेठ ११, काठमाडौँ । मङ्गलबार बिहानदेखि कान्छीमाया फियाकले खाना खाएकी छैनन् । उनका हातगोडा अझैँ कापिरहेका छन् । ओठ सुकेका छन् । सबैले सोध्ने प्रश्नको उत्तर दिएर उनी गलिसकेकी छन् । चिया र केही फलफूल खाएर उनी घरको वरपर गर्छिन् । सुनसान उनको घरमा अहिले दिउँसोको समयमा मान्छेको घुइँचो टुट्दैन तर राति भने कोही हुँदैन […]
यसरी हुन्छ नेपालमै कोरियाको कमाइ [पढ्नुहोस नालीबेली]